Home » Creative Writing » သည်းအူပြတ်မျှ – KZ’s ထမင်းဆိုင်
ငါးဥကို ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူအရည်ညစ် ဆားနယ်ပီး အရင်ပြုတ်လိုက်တာ…
ကြက်သွန် ဖြူ အနီ ဂျင်း အနှစ်ထောင်း နဲ့ နနွင်း ငြုပ်သီးမှုန့် ငါးပိ ဆီသပ်
နံနံပင်အုပ် ဆီပြန်ရင်ရပြီ အကြိုက်ဆွဲပေတော့
ငါးဆီဖောင်းချက် (ချက်နည်း – wow/ ပုံ – မွဘုတ်)
ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်ဖြူနီထောင်းထားတာလေး ဆီသပ်ချက်
ငါးစီပေါင်း ပြုတ်ကြော် (ချက်/ပုံ မွဘုတ်)
ရို့မေရီ ရှိထည့် မရရင်
ကြက် အချင်း ကြော် (ချက်နည်း – ဘုတ်/ ပုံ – မွသဲ)
ရေဆေးပြီးကြက်သွန်ဖြူ ချင်းထု ဆနွင်းဆားဆီ ထည့်ပြီးလုံးလိုက်
ပဲငံပြာရည် ငုတ်ကောင်း မဆလာ ကြိုက်ရာထည့်
၁။ စစချင်း ကြက်အူလေးများကို ဓားသေးလေးဖြင့် ခွဲ၍ ဖြစ်စေ၊
ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးခွဲ၍ဖြစ်စေ ခွဲကာ ဆားများများဖြင့် သေချာသန့်စင်အောင်
ထပ်ကာထပ်ကာ ဆေးကြော ပေးပါ။ အနေတော် ဖြတ်တောက်ထားပေးပါ။
ပြီးရင် ချင်း ထောင်းပြီးသား အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ထောင်းပြီးသား
အနည်းငယ်တို့ဖြင့် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ဖြင့် ဆုပ်နယ် ထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးကြမ်းတို့ကို
ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။ ဆီပူတွင် ထောင်းထားသော
ငရုတ်သီးကြက်သွန်ကို စပါးလင်ဖြင့်ဆီသတ်ပေးပါ။ ကြက်သွန်အရော
ကြွပ်လာပြီဆိုရင် ကြက်အူများကို ထည့်ပြီး ကြာကြာလုံးပေးပါ။
ဆီပြန်လာရင် ရေအနည်း ငယ်စီ အကြိမ်ကြိမ်ထည့် အဖုံးအုပ်လိုက်ဖြင့်
နူးသည် အထိ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကြက်အူများ နူးအိလာရင် ငရုတ်သီးများ၊
နံနံပင်များ အပေါ်ကအုပ်ကာ အဆုံးသတ်နိုင်ပြီ။
ဝက်သားဒုတ်ထိုး (ချက်နည်း- မသက်ငုံ/ ပုံ-မချိုသက်မာ)
ကလီစာတွေ ထည့် ကြော်
ဝက်အူမကြီးသုတ် နည်း/ပုံ မွ Ma Moe Khaing
စင်ကြယ်အောင်ဆေးထားတဲ့ ဝက်အူမကြီးကို နူးအောင်ပြုပ်ပါ
ဝက်အူမကြီးကိုပါးပါးလှီးပါ ထည့်လိုတဲ့ အသီးအရွက်ထည့်ပါ
ပဲမှုန့်ငြုပ်သီး သံပုရာသီး ဆီချက်ထည့်
အရသာမှုန့် ထည့် ငံပြာရည်ထည့် သုပ်လိုက်ရင်တော့
ချဉ်ငံစပ်အရသာနဲ့ဝက်အူမကြီးသုပ်ရပါတယ်
ဝက်ကလီစာ ချက် (credit to ချက်နည်း/ပုံ ကိုကိုကျောက်)
ဝက်ကလီစာ (အူချို+သရက်ရွက်+အသည်း) ကို မန်ကျည်းရည်နဲ့ သာသာယာယာ စင်အောင်ဆေးပါ ။ အူချိုကို ဖြူဖွေးပြီး တင်းနေတာရွေးဝယ်ပါ ၊ ပန်းရောင် အနီရောင်သမ်းလျင် ခါး၏ ။ ဆေးပြီးလျင် အူချိုကို အစွန်းနှစ်ဘက် ပိတ်အောင်ချည်ပါ (အတွင်းက အနှစ်တွေ ထွက်မှာစိုးလို့) ၊ သရက်ရွက်နဲ့ အသည်းကို အရွယ်တော်တုံးပါ ။ ပြီးလျင် ဂျင်းရည် + သကြားအနည်းငယ် + ကြာညို့ + အရောင်တင်မှုန့် + ပဲငန်ပြာရည်အကြဲအနည်းငယ်ဖြင့် နှပ်ထားပါ ။ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ + အရည်ညှစ်ပြီးဂျင်းဖတ် + အရောင်တင်မှုန့် ရောထောင်းပါ ။ အိုးထဲ ဆီသင့်ယုံထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ ၊ အနံ့မွှေးလာလျင် နယ်ထားတဲ့ ကလီစာတွေထည့်ပြီး သာသာယာယာမွှေ၍ အဖုံးအုပ်ထားပါ ၊ ရေလိုလျင် အနည်းငယ်သာစွက်ပါ (အရမ်းကျက်လွန်းလျင် မာသွားတတ်၏) ။ ဆီပြန်ခါနီးလျင် အူချိုတွေကို အရွယ်တော် ကိုက်ကျေးဖြင့်ဖြတ်ပြီး အရသာပြင်ပါ ။ ဆီပြန်လျင်ရပါပြီ ….
ဝက်ကလီစာ အရည်သောက် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်)
အူ အူမကြီး ကို ဆားမန်ကျည်းသီး နဲ့ဆေး သကြားနာနတ်ပွင့်နဲ့လှော်
အချဉ်က သံပုရာ ကြက်သွန်ဖြူ
ငရုတ်သီး သကြား ငါးငံပြာရည်နဲ့ ကဖောင်းရွက်စပ်ထားတာ..
ဝက်အူချက် (နည်း ကေဇီ/ ပုံ မားနန်း)
ရေခန်းပြုတ်ပြီးရင် စားချင်တဲ့ အတိုင်းချက်လို့ရပြီ
ဂျင်း တပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ဆီသတ်
ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းခပ်မှုန့်ထည့်ပြီးဆီပြန်တဲ့ထိ တည်။
ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းနဲ့ နို့အုံသား (ချက်နည်း – ဖက်ကက်/ ပုံ- မသိင်္ဂီ)
ဝက်ကလီစာ Hot soup (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်)
အစာအိမ် အူ နဲ့ အဆီတွဲအသား
Soup Base က
ပြည်ကြီးငါးအခြောက် နဲနဲ နဲ့ဝက်ရိုး ပေါ့
ဘဲအူပြုတ် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်)
အမဲဝမ်းတွင်းက ပန်းသေးပြုတ် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်)
မုံလာ ဥဖြူ တစ်လုံး
ကြပ်သွန်ဖြူ အခွံမခွာ နဲ့တစ်လုံး
ဖာလာကြီး ရှားကော့ တစ်လုံးပြုတ်ပါ ထုပြီးမှထည့်
ဆိတ် ဖိုက်တင်းဘော တဘွဲ
ဆိတ် 5ting ball မပါဘုတော့။
အရင်ဘ၀က ဘီလူးမ သေလို့ ၀င်စားလား မသိဘူး…
ယူအက်စ်မှာ အဲဒါတွေကို… ချိုင်းနီးဆိုင်မှာသွားရှာရမယ်…။
လာဘ်တွန်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ မက်ဆီကန် ဝက်ကလီစာပြုတ်ဆိုင် နယူးယောက်မှာ တွေ့ဖူးတယ်။ အူတွေ အခွေလိုက်…ဇက်ပြတ်နေတဲ့ ဝှီဂါမုမနဲ့ မာမွတ်ခိုင်မ်ကို သတိယလိုက်ထှာ..
ရေ ၃ ဂါလံ ဆိုလို့ မှားလားမသိဘူး တွေးနေတာ။
ဂျပန်နည်းအရဆို.. အဲလိုအဆီပါ၊ အညစ်အကျေးပါ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ အသား၊ကလီစာတွေပြုတ်ရင်.. ၂ခါပြုတ်လေ့ရှိတယ်..။ ပထမတခါပြုတ်ပြီး.. ရေအေးနဲ့ဆေးချသန့်စင်လုပ်လေ့ရှိတယ်..။
မြန်မာတွေ အမြှုပ်ကို ဆယ်လေ့မရှိဘူး။ ပဲပြုတ်လည်း မဆယ်ဘူး။ ဆယ်မိတဲ့ ကျမကိုတောင် ၀ိုင်းပြီး ပညာပေးကြသေးတယ်
အပေါ်က ဟင်းခွက်တွေ တစ်ခွက်မှ မစားဖူးတော့ လူဖြစ်ကျိုး မနပ်သလိုပဲ
ကြက်ကောက်ကောက် ဆိုတာ ကြက် အဟွာ တဲ့။
အစားအသောက်တွေပြပြန်ပီ။ စားပဲစားချင်တာ။ အဲလောက်လုပ်လည်းမလုပ်တတ်၊ စိတ်လည်း မရှည်ဆိုတော …….
ကလီစာတွေက စားချင်ပေမယ့် မစားတတ်တော့ လူဖြစ်ရှုံးတယ်ပဲပြောရမလားဘဲ
ငါးစီဖောင်း ဆိုတာ ကိုယ်က သေးသေးပဲ မြင်နေတာ။
ဒါက.. ကလီစာသမားတွေသိသင့်တဲ့.. ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်…။
စားရင်.. အပူချိန်မြင့်မြင့်မှာ.. ကြာကြာချက်ပါလို့စ်…။
တညား ဆီမှာ လေးဘက်နာမရှိပေမဲ့ ကိုလှစော ရှိမှာတော့ အမှန်ပဲ။